Ukukhethwa kweenoveli ezimnandi
Ukuphononongwa kwenoveli okumangalisayo
Iincwadi ezi-3 eziphambili ze-CS Lewis
Siphila ngokuqhubekeka bhanyabhanya bhanyabhanya oqhubeka kakhulu kudidi oluhle lwentelekelelo. Kulunge kakhulu (kunethuba elifanelekileyo) ukugqithisela kwiscreen esikhulu ukubonisa eyona fx ye-avant-garde. Kodwa iinoveli ezinkulu zikaTolkien (umhlobo osenyongweni ka Lewis), ezo zika CS Lewis ngokwakhe okanye uGeorge RR wangoku ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zeJK Rowling
Ngaphaya kosetyenziso oluphikisanayo lwee-pseudonyms ezinjengoRobert Galbraith okanye esona sishunqulelo sidumileyo uJK Rowling, lo mbhali waseBritane uhlala nentsomi yakhe. Ngokuqhelekileyo kwenzeka kwiindawo ezahlukeneyo zabantu abadumileyo bazo zonke iintlobo. Kwimeko esixhalabisayo, uJoanne Kathleen Rowling (...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo kakhulu nguDavid Foster Wallace
Ngaphandle kokuba ngumfuziselo eUnited States, ukufika kukaDavid Foster Wallace emsebenzini eSpain kwafika njengohlobo lokwamkelwa kwentsomi emva kokuba efile. Kungenxa yokuba uDavid wayenengxaki yoxinzelelo olwalumkhathaza kwasebutsheni bakhe kude kube ziintsuku zakhe zokugqibela xa ...
Ubume boMhlaba ophakathi, nguTolkien
Kwimeko yendalo yonke ebaliswayo eyenziwe ngu-JRR Tolkien, intelekelelo iphelela ekubalekeni kuloo mgca ungqameneyo, ukusuka ekudluliseni kwizithuba ezicingisisiweyo ezichazwe ngokuchanekileyo kwaye zihlala ngamandla ukufikelela kwiindawo ezibonakalayo. Inyaniso inecandelo elithobelayo apho kudala yavuza ...
Iincwadi ezi-5 eziphambili zefantasy
Ubumnandi luhlobo loncwadi apho ubuntwana kunye nokuvuthwa kuhlangana khona ngaphandle kwayo yonke into. Umvuzo uhlala uyolo lweparadesi eyakhiwe ngexesha lobuntwana kwaye ifunyenwe inombulelo kumnandi xa iminyaka ikhwela emqolo wethu. Ngenxa yoko eyona ...
Ukuzalwa kweHero, nguJin Yong
Ukuthelekisa okunye okubhaliweyo emhlabeni kunye nezandi zeTolkien kuhlambalaza. Ke ukujolisa kuJin Yong njengesihlobo saseBritane sobukrelekrele kubonakala ngathi sisixhobo sokuthengisa esingenantlonelo nangakumbi. Kude kube ufumanisa ukufikelela kweYong nangona itsalela ngakumbi ...
UMoya noNksk Muir, nguRA Dick
Ukuba iAlaska yathandana ne-zombie kwaye yamazisa kubazali bayo, kwakutheni ukuze uNkosikazi Muir angabi nalo uthando kunye nesiporho sendlu esingahlali mntu? Yonke into ngumba wexesha kunye nefom. Umzuzu ulinde nokuba uhambe nawe ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaLee Carroll
Phakathi kwemisebenzi efana neNkosana eNcinci nguAntoine de Saint Exupéry kunye neNqaku eliQinisekayo likaMichael Ende, iya kufumana indawo entle ka-Alice eWonderland. Ukufundwa okufanelekileyo kakhulu kwabantwana kwaye kungabi kangako. Isebenza ngokudibanisa nefantasy kunye nexabiso elingenakulinganiswa lomntu. Kwi …
Iincwadi ekufuneka uzifunde ngaphambi kokuba ubhubhe
Sesiphi isihloko esingcono esinekratshi kancinci kunale? Phambi kokuba usweleke, ewe, kwiiyure nje ezimbalwa phambi kokuba uyiphulaphule, uya kuthatha uluhlu lwakho lweencwadi ezibalulekileyo kwaye uwele esona sithengiswa kakhulu nguBelén Esteban evala isangqa sokufunda sobomi bakho… (yayiyintlekisa, i-macabre kunye nesiqhulo esinegazi) Ayisiyonto encinci…
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha6 Elandelayo →